merolagani - जताततै भद्रगोल छ गभर्नर ज्यू, मौद्रिक नीतिमार्फत यसो गरे हुन्न ?
Jun 19, 2017 Merolagani
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्ने विषयका सम्बन्धमा निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य सरकारी निकायले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवाला सबैको उपस्थितीमा गरेको अन्तरकृयामा कसले के भने ?
उच्च व्याजदर, आर्थिक वृद्धि लगायत विषयमा सहभागिहरुले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पछिल्ला दिनमा बैंकहरुले निर्धारण गरेको व्याजदरले आम नागरिक बैंकिंगबाट ऋण लिन नसक्ने तर पहुँचवाला मालामाल हुने गरेको तर्फ अन्तरकृयाका सहभागिले गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।